Mayelana NATHI - ZhangZhou Excellent Import and Export Co., Ltd
Ucingo / WeChat / WhatsApp: + 8615260692977
Ummbila omnandi okheniwe
Ukubekwa uphawu Machines
Isixazululo se-Whole Production Line
Ukudla kwasolwandle okufriziwe
Inkampani eyi-Excellent, enebhizinisi elingaphezu kweminyaka eyi-10 lingenisa futhi lithumela kwamanye amazwe, lihlanganisa zonke izici zezinsizakusebenza futhi lisekelwe kokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengama-30 ekukhiqizeni ukudla, asinikezi kuphela imikhiqizo yokudla enempilo nephephile, kepha nemikhiqizo ehlobene nokudla - ukudla iphakethe nemishini yokudla.
Ukugxila eketangeni kusuka epulazini kuye etafuleni, Inkampani eyi-Excellent izibophezele ekuhlinzekeni ngokuqhubekayo imikhiqizo yokudla enempilo nephephile kanye nokupakishwa kokudla kobungcweti kanye nesisombululo semishini yokudla kumakhasimende ethu ukuthola impumelelo.
E-Excellent Company, Sihlose ukwenza kahle kukho konke esikwenzayo. Ngefilosofi yethu ethembekile, ukwethembana, inzuzo yomuthi, ukunqoba, siphumelele, Sakhelwe ubudlelwane obuqinile obuhlala njalo namakhasimende ethu.
Inhloso yethu ukweqa okulindelwe ngabathengi bethu. Kungakho silwela ukuqhubeka nokuhlinzeka amaklayenti ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, okuhle ngaphambi kwensizakalo nasemva kwensiza ngayinye yemikhiqizo yethu.
Inkampani yeZhangzhou Excellent Import & Export itholakala edolobheni laseZhangzhou, eduze neXiamen, esifundazweni saseFujian eChina. Inkampani yethu yasungulwa ngo-2007 ngenhloso yokuthekelisa nokusabalalisa ukudla.
Inkampani yeZhangzhou Excellent ibisebenza ngempumelelo emakethe yokudla yamazwe omhlaba. Inkampani yethu yakha idumela layo njengomhlinzeki wemikhiqizo enempilo nekhwalithi ephezulu. Amakhasimende avela eRussia, Middle East, Latin America, e-Afrika, eYurophu nakwamanye amazwe ase-Asia ahlala anelisekile kakhulu ngemikhiqizo yethu. Ukuba namakhono aphambili kwezobuchwepheshe, sikulungele ukukhiqiza ukudla okuhlukahlukene kakhulu futhi sinikeze amakhasimende ethu izixazululo nezinketho ezingenakulinganiswa ngenani, ikhwalithi nokwethembeka.